UJordani Peele wajika 'Ndinayo e-5 kuyo' Yenziwa Ingoma eyoyikisayo 'kuthi' - Iimuvi
Eyona Iimuvi Njani iJordani Peele ajike iTrack Party Track 'Ndifumene i-5 kuyo' Yangena kwingoma eyoyikisayo kwiFilimu yakhe eNtsha, 'Us'
IJordani Peele.I-Kevork Djansezian / imifanekiso kaFetty
Xa umlawuli kunye nombhali wesikrini IJordani Peele uphumelele u-Oscar ngombhalo omangalisayo awenzele wona Phuma- Imovie eyoyikisayo ephawulayo malunga nendoda emnyama ebanjwe yintsapho yakhe yokubulala intombi yakhe emhlophe eyaba yenye yezona bhanyabhanya zinenzuzo kakhulu ngo-2017 -kwakucacile ukuba wayevula izikhukhula ukuze enze umsebenzi omangalisayo ongaphaya. Ngethamsanqa, i-Peele's hot streak ayikho ndawo kufuphi.
Ngomhla weKrisimesi, uPeleele wawisa itreyila kwifilimu yakhe elandelayo, Nathi , kunye nokulawula kwakhe inkcubeko yepopu iphambili kwaye iziko. I-trailer ibonisa i-jam yamatye Ndine-5 kuyo ngu-Oakland hip-hop duo uLuniz, enikezelwa kwakhona nguPeele njengesiqwengana, isoyiksi esibuhlungu emva kobuhlungu obujamelene nabalinganiswa kumdlalo bhanyabhanya.
Ndine-5 kuyo yingoma yomgidi; ingoma eyilelwe ukukupholisa kwaye ikubeke ngokukhululeka. Nokuba awuyazi itayitile, uyivile ngaphambili. Mhlawumbi yayidlala kwivenkile yokutya ngelixa wawungathenganga, mhlawumbi yayiqhuma kwizithethi zelaptop zomhlobo wakho ethekweni-kodwa akukho nto ibalulekileyo ngoku. Ukuqala kwakho ukukuva kwaye uyonwabele kuye kwacinywa kwaphela kwimemori yakho, kuba uPeele uyisongele nje ukuba ibe sisimemo esothusayo ngokuhambelana ne IHalloween umxholo womculo . Abasebenzisi ku-Twitter bakhawuleze ukuphawula ukuba ingoma ayinakuze iphinde ifane kwakhona.
Ngexesha elizayo xa ndinama-5 kuyo Iyadlala pic.twitter.com/wAxxOdVN0W
-Ngubani Gal (@quiify) NgoDisemba 26, 2018
IJordani Peele ibout yokwenza sonke isizukulwana sabantwana esoyikeka ukuba Ndinayo 5 Kuyo
-Umfundisi uJuanita Rent-um (@seelolago) UDisemba 25, 2018
WELP, ngoku ndiyoyika ukuba ndifumene i-5 kuyo kunye nokucinga kwam. Omnye umsebenzi wobugcisa kwaye andinakulinda. .️
-Robin Thede (@robinthede) UDisemba 25, 2018
Ngapha koko, amanqaku atshintshayo aqala umdlalo Ndine-5 kuyo kunye nepiyano engathandabuzekiyo kwi IHalloween theme zingaphezulu kokufana ngokufana, zivakala ngokufanayo. Kwitreyila, umkhondo uqala njengesiqhelo, kodwa kancinci uPeele uyajijisa amazwi endinawo u-5 kwisikhalo esikrakra.
Kodwa intshukumo yakhe eqaqambileyo wayeqonda ukuba ndinayo i-5 kuyo yayisoyikisa kwasekuqaleni, ngaphandle kokuyiguqula ukuze ilungele ibali lakhe. Amanqaku amancinci amnandi ekuqaleni kwengoma; indlela ephelelwa ngayo kukugungqa kweebass ezivakala njengesilumkiso… uPeleele wayeyazi indlela phambi kwethu sonke ukuba yintoni elele phantsi komphandle obonakala umnandi. Ekuphela kwento ekufuneka eyenzile kukusibonisa indlela.
'IGrey's Anatomy' Igqirha uJustin Chambers uvula indawo yokuhlala eMpuma
I-Picasso's Portrait ye-Muse Marie-Thérèse Walter Kulindeleke ukuba ithengise nge- $ 55 yezigidi
kwindawo ethile ngaphaya komnyama womntu waseHawaii
Ukubulawa kwe-gianni ngokuchasene ne-fx
yintoni ukunqanda ukutya kwendalo
Ukuthengisa iingqekembe zegolide ngemali
Ngaba ioyile ye-cbd ikhuselekile ezinjeni
eyaziwayo b.i.g. Eyona nto ibalaseleyo kwi-biggie encinci
iziza zokuzalwa ngokutsha kwamakristu